Home Wararka (Xog) Shacabka Muqdisho oo isku diyaarinaya Mudaaharaadyo & Farmaajo oo dardar gelinaya...
(Xog) Shacabka Muqdisho oo isku diyaarinaya Mudaaharaadyo & Farmaajo oo dardar gelinaya xulashada Aqalka Sare
Xog ay MOL ka heshay Villa Somaliya ayaa sheegeysa in sida ugu dhaqsaha loo magacaabo aqlka Sare xubnihiisa taas oo loo sheegay Dowlad Goboleedyada inaysan isku xirneyn guddiyada doorashada ee lagu muransan yahay iyo aqalka sare.
Arrintan ayaa u muuqata durbaba qaar ka mid ah DG & Cabdi Xashi oo dowladda kala heshiiyey inay qeybsadaan xildhibaanada G/Waqooyi oo uu qeyb isaga soo magacaabo qeybna ay Fahad iyo Farmajo soo magacabaan.
Degdegta arrimahan waxaa looga gol leeyahay:
In cirka loo tuuro 13 Xubnood ee Gobolka Banaadir loo ballanqaaday taas oo ah arrin ay ku heshiin karaan kooxo kala duwan oo la ogaa inay si cad uga soo horjeedeen xubnaha Banadir la siinayo.
In si degdeg ah loo sameeyo aqalka senatka oo ay ka maqan yihiin xubnihii la ansixiyey ee Gobolka Banadir hadhowna la yiraahdo aqalka ayaa loo deynayaa qaabkii loogu dari laha. Waxaana la yiraahdaa furitaankii albaabkii ma dhamaatada.
In shacabka Somaliyeed iyo beesha Caalamka lagu beer laxowsado in ay Dowladda bilowday hawlihii doorashada (election Process) sidaas darted uu Farmajo sii joogi karo inta ay hawlahaan ka dhamaanayaan. Waana waddo kale oo khiyaano cimri dheereysi ah oo ay qorsheysteen Fahad iyo Farmajo.
Waxaa halkaasi ka muuqata in dalka mar kale lagu wado waddo aad u khatar badan waayo dadka Muqdisho iyagoo ah canshuur bixiyaha kaliya haddana dushooda mar kale lagu soo dhiso dowlad ay ku khasban yihiin Somali jeceyl darted inay biilaan oo bannaanka laga dhigay.
Mar la weydiiyey MW Farmajo in haddii aan loogu darin 13ka xildhibaan ee lagu heshiiyey maxaa dhici kara? Waxaa uu ku jawaabay “ waxba ma dhacayaan waayo maaha dad isku ujeeddo ah sida Puntland ama Jubaland oo haddaba waxaa nala jooga dad badan oo iyaga ah, marka waa ka soconeynaa”. Hadalkan waxaa muuqata ballan kabax u talagala ah oo markiiba ahayd qowda maqashiin waxna ha u qaban iyo in Muqdisho iyo dadkeeda aysan MW Farmajo waxba ugu fadhiyin, Fahadna uuba qababa in la laayo haddii la awoodi karo.
Sidaas darted Dadka Gobolka waxaa la gudboon:
In MW Farmajo aysan ka yeelin inuu miiska hoostiisa ku haysto xubinii loo ansixiyey.
In Maamul goboleed diidi karaa uusan jirin 13ka xubnood ee ay khasab tahay in lagu soo daro aqalka sare 2021.
Inaan lagu marmarsimoonin dastuurka kuma taal. Dastuurka kuma taallo in dadka bixiyaa Canashuurta dalka aysan wakiillo ku lahayn golayaasha dalka looga taliyo waayo ma jirto cid Xamar magaceeda ku fadhido golayaasha qaranka.
In ay dadka Muqdisho sida ugu dhakhsaha badan u sameystaan maamul goboleed oo aan cid kale lagala tashan.
Dalka dowlad la’aan ma aha ee waa dowlad aan dadka ay dulsaaran tahay u adeegin, haddii kale waa inay dhacdaa ee la helaa dowlad xaqsoor ah oo dalka uu u siman yahay.